CALOOL XUMO - 2
Muqdisho ayaad leedihiin. Waa muqdishadee, midaad ka hadlaysaan. Ma magic jiri jirey ayaad sheegeysaan, mise magaalo.
Muxaadara aan ka jeediyey booqashooyinkayga magaalada mid ka mida, ayaan ku sheegay: war miyeynaan damiir dhaqaaqa lahayn, miyeynaan ummad nolol dooneysa ahayn, miyeynaan ujeedin waxa aynu dhex fadhino. Walaalayaal magaala kuma noolin. Ee wexeynu dhex jiifnaa: Kudaafad weyn!!
Mexey tareysaa, inaad malaayiin doolar haysato, laakiin, aadan wada nabad u mari Karin, inaad wadato labatan qorya ku heegeysan mooyee, mexey tareysaa aqal nadiifa ood kasoo baxday, iyadoo gidaarkaaga qashinku buuraha leegyahay, jidadka aad mareysana ciid iyo qashin qariyey, guryaha aad dhex mareysana mid dunsan, mid madaafiici gubtey oo madow, iyo mid siduu u egyahay calooshu kaasoo dhacdo.?
Jidka Muqdisho iyo Agooye isku xira, waa 30 km, waxaan ka badnayn. 20 jid gooyo ayaad maraysaa. Taa kasokow waxaa naxdin leh, oo tusaale kuugu filan, meesha aan ummad ahaan iyo hoggaan ahaanba mareyno:
Marka aad wax yar lafoole soo dhaafto, ado xagga afgooye u jeeda, laamigii yaraa, oo awalba miskiinka ahaa, oo mindhaa weligiis xitaa dawladii maxamad siyaad ayan dayactir ku samayn, haddana wuu roonaa, wax yar markaad socotid godad waaweyn ayuu isu bedelayaa, dabadeedna gaarigu waa inuu ka degaa laamiga (cafwan – meeshii laamiga ahaan jirtey) oo wada ka jeexdaa dhiniciisa. Gaariga markaa si fiican u qabso.
Waxaad u diyaar garoobi sida hanta caanaha loogu ruxo, in laguu ruxo, wixii caloosha ku jiraana bannaanka yimaadaan, waxaa kuu sii dheer boorka (cara guduuda) inaad ku hafato, ilaa aad afgooye kala baydhkiisa ka gaarto. Haddaad xagga bali dooogle iyo wanlaweyn u keceysid waad nasiib badan tahay, waayo wadado xoogaa caadi ayey ku soo noqoneysaa. Hadaadse xagga marka iyo (airportiga cusub) ee # 50, aad u leexaneysid ALLAHA KUU NAXARIISTO.!
Maalin walba jidkaas waxaa mara, (madax!!!!) dagaal oogayaal!!!! Hogaamiye kooxeedyo!!!! Dawlad lasoo dhisay sidii tii carta iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyey!!!!!!Ganacsato, kuwa hore iyo kuwii xiliga dagaalka soo baxay!!!!!Culimo iyo shacab weyne badan!!!
Haddana waxaas 10 km oo naftu kaaga bexeyso, lama garan ilaa hadda ineyno samayn karno, oo si fudud ku hagaajisan karno, waa danteenna, waa dawladnimo, waa wax qabsasho, waa sadaqo, ajar ilaahay lagaga helo. Xitaa waa ganacsi, haddii inta la hagaajiyo, lacag lagaaga qaado diyaar ayaad u noqon lahayd.
Inta dawlad meeshaas kolonyo laan crusara ah ku marta maalintii, xisaab ma leh.
Ummadaas sidey u noolaaneysaa, sidey dawladnimo ku keeneysaa?
Dawladaha ku sheegyaalku ma garanwaayeen, ganacsatadu ma garan weydey, kuwa diyaaradaha leh iyo kuwa airportiyada lihi, magaran waayeen, ineey maslaxadooda (Business) tahay, oo haddeey wixii soo gala dhawr maalmood halkaas geliyaan, iney boqolaal jeer in ka adani usoo noqoneyso.
Miyeynaan garanayn mise weynaan rabin? Waxaan is leeyahay, dadka soomaaliyeed haddii la tuso, oo loo bilaabo, oo la baro, wexey ka mid yihiin, umadaha ugu khayrka jecel, laakiin maamul wanaagsan, iyo hogaan fiican toona ma helin, allaha usoo saaro…